यस्तो भए यौन सम्पर्क बढी यादगार बन्न सक्छ ? - Gaule Media ::
Home/रोचक/यस्तो भए यौन सम्पर्क बढी यादगार बन्न सक्छ ?
यस्तो भए यौन सम्पर्क बढी यादगार बन्न सक्छ ?
ramsharan२२ कार्तिक २०७४, बुधबार ०२:०७
कति पुरुषहरुले जति लामो अवधि यौन सम्पर्क गर्न सक्यो उति पुरुषार्थ ठान्ने गरेका छन् । तर साँचो अर्थमा लामो अवधि यौन सम्पर्क गर्नु पुरुषार्थ नहुन सक्छ । आफ्नो यौन साथीलाई चरम आनन्द दिलाउन लामो समय सेक्स गर्नु पर्छ भन्ने छैन ।
चरम सन्तुष्टिमा पुग्नलाई यौन अवधिको खासै हिसाव गरिदैन । बरु सेक्स गर्दा अपनाइने विधी, तरिकाले पाट्नरको चरम सन्तुष्टि दिलाउने अस्त्र बन्न सक्छ । यसको मतलव योनीमा लिङ्ग पसाउना साथ स्त्रीको यौन तृप्ति पुरा भइहाल्छ त्यसो भन्न खोजिएको होइन । एकअर्काको आनन्दलाई महसुश गरेर गरिने यौन सम्पर्क बढी लाभप्रद हुन्छ । लामो समय लगायर मात्र यौन सन्तुष्टि पुरा नहुन सक्छ ।